पर्वतीय संग्रहालयमा आन्तरिक पर्यटक बढ्दै, बार्षिक पौने ३ करोड आम्दानी – Shuva News
पर्वतीय संग्रहालयमा आन्तरिक पर्यटक बढ्दै, बार्षिक पौने ३ करोड आम्दानी
Shuvanews २३ मंसिर २०७५, आईतवार 326 Views
पोखरा १७ घारीपाटनमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालयमा आ.व. ०७४/७५ मा २ करोड ७८ लाख आम्दानी भएको छ । संग्रहालयका पूर्व कार्यकारी निर्देशक बलबहादुर राईका अनुसार गत बर्ष २ लाख ६२ हजारले संग्रहालय अवलोकन गर्ने गरेका छन् । जसमध्ये करिव २० प्रतिशत विदेशी र बाँकी स्वदेशी पर्यटक रहेका छन् ।
अवलकोकनका लागि आउनेमा अधिकांश विद्यार्थीहरु रहने गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । दक्षिण एशियाकै ठूलो मध्येमा रहेको उक्त पर्वतीय संग्रहालयमा अवलकोनका लागि सार्क राष्ट्रबाहेकका विदेशी नागरिकले लागि ५ सय, सार्क राष्ट्रका नागरिकले २५०, नेपाली नागरिकले १ सय र विद्यार्थीले पचास रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । गार्डेन हेर्न आउनेलाई तीस रुपैयाँ र फिल्म तथा म्यूजिक भिडियो छायाकंनका लागि ५ हजार र २५ सय शुल्क लिने गरिएको छ ।
हिमाली जनजीविन, हिमाल आरोहण, जलबायु परिवर्तन लगायतका विषयमा संग्रहालयमा प्रशस्त जानकारी लिन सकिन्छ । हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने शेर्पा, थकाली, छन्त्याल, गुरुङ, ह्याल्मो, तामाङ लगायतका जातिका भेषभुष, रहन सहन, संस्कृतिका बारेमा संग्रहालयमा जानकारी समावेश गरिएको छ ।
यसका साथै विश्वका विभिन्न हिमश्रृंखला, हिमाल आरोही, जलबायु परिवर्तनले हिमाली जनजीवनमा पारेको प्रभाव लगायतका विषयमा पनि अवलोकनकर्ताले उक्त संग्रहालयमा जानकारी लिन सक्नेछन् । राईका अनुसार हरेक बर्ष ३० देखि ३५ प्रतिशतका दरले अवलोकन कर्ताको संख्यामा बृद्धि भइरहेको छ ।
२०६० सालमा १ सय रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको संग्रहालय पोखरा क्षेत्रको मानवनिर्मित पर्यटकीय उत्कृष्ट गन्तव्यस्थलका रुपमा विकास भइरहेको छ । संग्रहालयको परिकल्पना डा. हर्क गुरुङ र कुमार खड्गविक्रम शाहले गरी निर्माण स्थल पोखरालाई नै छनौट गर्न भूमिका खेलेका थिए । संग्रहालयमा हिमाल सम्बन्धि विस्तृत विवरण समावेश गरिएको छ । अध्ययन अनुसन्धान गर्ने जो कोहीलाई पनि संग्रहालय उपयुक्त गन्तव्य बनेको छ ।